Dada Art - Imbali yeDadaism (1916-1923)
Kutheni le 1916-1923 "intshukumo engekho yobugcisa" ibaluleke nakwihlabathi lobugcisa
Ngokusemthethweni, iDada yayingekho intshukumo, abaculi bayo abayi- artists, kwaye ubugcisa babo abukho ubugcisa. Oku kuzwakala kulula, kodwa kuninzi ibali leDadaism kunokuba kuchazwe ngokulula.
UDada wayengumanyano wokubhala nobugcisa owazalelwa eYurophu ngelixa ukuqhutyelwa kweMfazwe Yehlabathi I kudlalwa kwindleko eya kubahlali bephambili. Ngenxa yemfazwe, uninzi lwabaculi, abalobi kunye neengqondo-ngokugqithiseleyo kwisizwe saseFransi noJamani-bafumana behlanganisana kwindawo yokukhusela ukuba iZurich (kwiSwitzerland engathathi hlangothi) inikezele.
Kunokuba nje bazive bekhululekile kwiindawo zabo zokusinda, eli qela lacaphuka kukuba uluntu lwamaYurophu lwangoku vumela ukuba imfazwe yenzeke. Babethukuthele, enyanisweni, ukuba bathabatha ixesha lokuhlonipha.
Ukudibanisa ndawonye kwiqela elizimeleyo, aba balobi kunye nabaculi basebenzise nayiphi na iforamu yoluntu abayifumanayo ukujongana nobuzwe, ukuqonda izinto, ukuthanda izinto eziphathekayo kunye nayiphi na enye-into ebonwa ukuba yayiye yabangela imfazwe engenangqiqo. Ngamanye amazwi, amaDadadi atyiswa. Ukuba uluntu luya kulolu hlobo, bathi, asiyi kuba nenxalenye yalo okanye izithethe zalo. Kubandakanya ... akukho, linda! ... ngakumbi izithethe zobugcisa. Thina, abangengabalandeli , siya kudala ngaphandle kobugcisa ukususela ngobugcisa (kunye nayo yonke into ehlabathini) akanalo nentsingiselo, nantoni na.
Ngaloo nto kuphela loo nto engekho abaculi abaye bafana ngayo. Kwaye kwakunzima ukuvuma igama leprojekthi yabo.
"Dada" - into ethi abanye bathi "ihhashi yokuzonwabisa" ngesiFrentshi kwaye abanye bacinga ukuba intetho yentsana-yayingumhlathi-wokubamba okwenza umlinganiselo omncinci , ngoko ke "Dada" kwakunjalo.
Ukusebenzisa uhlobo oluthile loBugcisa bobuGcisa, amaDadada abangela ukunyaniseka okubambileyo, ukuhleka kwezinto ezihlaselayo, izinto ezibonakalayo kunye nezinto zemihla ngemihla (ekuthiwa "ubugcisa") kuluntu loluntu.
wenza umsebenzi obalaseleyo ngokupenda amadevu kwikopi kaM Mona Lisa (kunye nokubhala ubungcolileyo ngaphantsi) kunye nokuzibonakalisa ngokuziqhenqa umfanekiso wakhe onelungelo elibizwa ngokuba ngumthombo (okwakubonwe ukuba ngumlambo, ongenawo uphethiloli, apho wongeza khona umqondiso wesinyanzelo).
Uluntu, ngokuqinisekileyo, lwachithwa-apho abaDadesi bafumana ukukhuthaza. Inzondelelo isasazekayo, intshukumo (engekho) inokusasazeka esuka eZurich ukuya kwezinye iindawo zaseYurophu naseNew York City. Kwaye njengokuba abaculi abaqhelekileyo babenikela ingqwalasela enkulu, ekuqaleni kwee-1920, uDada (okwenene kwifomu) waziqhayisa.
Ngomtsalane othakazelisayo, lo bugcisa bokuqhankqalaza-ngokusekelwe kumgaqo-siseko osisiseko-uyonwabile. Iingxaki ezingenangqondo ziyinyaniso. Ubugcisa beDada bubuhlungu, bubalabala, bukrakra kwaye ngezinye izihlandlo. Ukuba umntu wayengazi ukuba, ngokwenene, ingqiqo emva kweDadaism, kuya kuba mnandi ukucinga ngokuthethwa ngaba bafana "xa" xa badala ezi ziqwenga.
Impawu eziphambili zeDada Art
UDada waqala eZurich waza waba ngumbutho wehlabathi. Okanye kungekhona- ukuqhutyelwa, njengoko kunjalo.
UDada wayenomgaqo owodwa kuphela: Ungaze ulandele nayiphi na imithetho eyaziwayo.
I-Dada yayenzelwe ukukhupha impendulo yomzwelo kumbukeli (ngokukrakra okanye ukuthukuthela). Ukuba ubugcisa balo behlulekile ukucaphukisa iinkokeli zenkcubeko, ukubhala kukaDada - ngokukodwa imbonakalo-kuboniswe kakuhle, isicwangciso se-britch-thumbing B.
Ubugcisa beDada buyinto engabonakaliyo kwinqanaba lokukhwaza. Phantse bonke abantu abayidalileyo babenzima kakhulu, nangona kunjalo.
Ukukhunjulwa kunye nokuCaphula kwakuyimpembelelo ephezulu kwiDada, ilandelwa yiCubism kwaye, ngaphantsi kwe- Futurism .
Kwakungekho nhlobo ephezulu kwi-Dadaist yobugcisa. Zonke izinto ezivela kwii-tapestries zejometri ukuya kwiglasi ukuze zifake kunye neenqwelo zokhuni ziyimidlalo efanelekileyo. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba, ukuhlanganisana , i- collage , i- photomontage kunye nokusetyenziswa kwezinto ezilungiselelwe konke kwamukelwa ngokubanzi ngenxa yokusetyenziswa kwabo kwiDada yobugcisa.
Kwinto ethi kwakungekho nto, uDada ngokuqinisekileyo wadala amaninzi amanqabana. Ukongezelela ekuveliseni iincwadi zamaphephancwadi ezininzi, uDada wathonya ezininzi iindlela ezibonakalayo kwezobugcisa (ngokukodwa kwimeko yeConstrucism ). Intshukumo eyaziwayo kakhulu uDada wayejongene ngokuthe ngqo kwi- surrealism .
UDada wayezibhubhisa xa wayesengozini yokuba "yamkelekile."
Ubugcisa bobudala beMesolithiki (malunga no-10,000-8,000 BC)
Yiyiphi Impawu Kubugcisa?
Fumana i-Url ye-Hyperlink xa uMouse uhamba Ngaphezulu kwe-TWebBrowser Document
I-Mongol Siege yaseBaghdad, 1258
Iindlela zokufundisa eziMatisensory kwiDyslexia